Ụlọ Ọgwụ Na-eme Nanị Ịgba Ọsọ Ụlọ Ọgwụ China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ Ụlọ Ọgwụ Na-eme Ka Ịgba Ọgwụ,Ọnụ mpempe akwụkwọ na ngwongwo igwe anaghị agba,Ọnụ Ụzọ Ụlọ Ime Ụlọ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Ịgba Ọkụ n&#39;Ụlọ > Ụlọ Ọgwụ Na-eme Nanị Ịgba Ọsọ Ụlọ Ọgwụ
Ihe Nlereanya.: HF-L2657
Ọnụ ụzọ ọhụụ nke ụlọ ọgwụ, ọnụ ụzọ ọ bụla nwere otu efere ígwè nchara, jikọtara ya na ngwungwu nke okpokoro nke okpukpu alumini na ike dị elu nke anụ ọhịa na-acha, nke gburugburu akwa igwe anaghị agbacha agbacha, mezie ihe ziri ezi nke dị elu, mechie elu nke elu akwa EPDM bụrụ ihe akara zuru oke. Ngwongwo ígwè nchara nke nwere nchara na -eme ka oyi na-acha na-acha ọcha na-acha ọcha polyester electrostatic ntụ ntụ. arụ ọrụ ya dị ka ụkpụrụ GB5237.4-2000 (dịka ụkpụrụ kwekọrọ na ụkpụrụ European bụ QUALICOA D), na mmepe nke ọtụtụ osisi. Door Press (nlekọta ahụike ọgwụ mgbochi ọrịa X-ray) na-ekpuchi ọkpụrụkpụ kwekọrọ na stereotype, nchebe na-ekpuchi oghere 2mmpb, ọkpụrụkpụ nke nchekwa nke ọzọ 1mmbp. Ihe dị iche iche na-eme ka a na-ahụ anya dị iche iche, dị iche iche na mgbidi ahụ, na-agbanwe agbanwe nke mmetụta iji zere ọnụ ụzọ, na-eme ka nchebe dị nchebe, ị na-emeghe nke ọma.
Kedu ihe bụ nkọwa nke ụlọ ọrụ anyị?
1. Ụzọ n'ime ime jupụtara PUPS foaming XPS. Ọnụ ụzọ ahụ dị mma nke na-ehicha ike na ezigbo arụmọrụ ọkụ na-eji plastik na-atụgharị akwa.
2. Ọ nwere ike imeghari maka ọnọdụ ihu igwe dị egwu na mpaghara dị iche iche, na gburugburu njedebe nke ala ala pụrụ iche na eriri a na-emepụta nke a na-eme iji hụ na ọnụ ụzọ ahụ nwere mmetụta dị mma.
3. Ejiri ya na ngosi nke ngosi LED di kwa.
4. Onye na-ebelata ikike ụlọ nche ụlọ ọgwụ kwesịrị ịmepụta ya. N'ihi ya, o nwere ike belata ụda iji mee ka ụlọ ọcha dị ọcha.
5. Ngwaọrụ mkpofu ụlọ ahụ nwere ike imezi ụzọ site n'akụkụ anọ, elu, ala, aka ekpe na aka nri, na-eme ka ọnụ ụzọ ruo mmetụta nchịkọta dị mkpa.
6. Ogwe ọkụ eletrik ga-agbaso ụkpụrụ nke EMC iji zere ọgba aghara na ngwaọrụ ahụike.
7. Ogwe aka nke igwe eletrik nwere oke.
ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ
Ezubere maka ime ụlọ dị ọcha dịka ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ mmepụta ọgwụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ziri ezi, ụlọ ahịa nri, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọgwụ.
Slzọ mbata ụlọ ọgwụ dị mma Kpọtụrụ ugbu a
Actorylọ ahịa ọnụ ụzọ ụlọ amịpụtara ọnụahịa Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa gbachie ọnụ ụzọ ụlọ ọgwụ nwere mkpuchi Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ ụlọ ime ụlọ dị mma dị mma Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Ụlọ Ọgwụ Na-eme Ka Ịgba Ọgwụ Ọnụ mpempe akwụkwọ na ngwongwo igwe anaghị agba Ọnụ Ụzọ Ụlọ Ime Ụlọ Ụlọ Ụlọ Ọgwụ Ahụike Ọgwụ Ụlọ PVC Ụlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ Ụlọ Ụlọ Ọgwụ nke Ụlọ Ọgwụ Ahịa Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ọnụ Ụzọ Ụlọ Ọrụ Na-agba ọsọ